Kufamba uye yekushanya dhizaini-yekuita zviitiko pasi ingangoita 7% muna Chikunguru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Kufamba uye yekushanya dhizaini-yekuita zviitiko pasi ingangoita 7% muna Chikunguru
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Basa rekuita rakaramba riri padanho rakaenzana mumisika yakakosha seUSA, UK neChina, nepo India neAustralia vakaona kuvandudzwa kwechiitiko chekuita.
Kubata zviitiko munzvimbo yekufambisa neyekushanya zvichiri kuramba zvisingaenderane.
June akaratidzira zvimwe zviratidzo zvekudzoka zvichitevera kuderera mumwedzi mishoma yapfuura.
Iyo rebound mune dhiri chiitiko haigone kutsigirwa kwenguva refu.
Huwandu hwezvibvumirano makumi matanhatu nemapfumbamwe (zvinosanganisira kubatanidzwa pamwe nekutengwa [M & A], mari yakazvimiririra, uye mari yekudyidzana) zvakaziviswa mubazi repasirese rekushanya nekushanya muna Chikunguru 69, kunova kudzikira kwe2021% pamusoro pe6.8 zvibvumirano zvakaziviswa mumwedzi wapfuura.
Kubata zviitiko munzvimbo yekufambisa neyekushanya zvichiri kuramba zvisingaenderane. Kunyange June akaratidzira zvimwe zviratidzo zvekudzoka zvichitevera kudzikira mukati memwedzi mishoma yapfuura, kudzokorodza muchiitiko chekuita hakugone kutsigirwa kwenguva yakareba naJuly zvakare kuchinjisa maitiro. Izvi zvinogona kunzi zvakakonzerwa nekurambidzwa kwekufamba uye mamiriro emusika asina kunaka kune chikamu mune dzimwe nyika.
Chiziviso cheyakazvimiririra kuenzana uye M & A madhiri zvakadzikira ne58.3% uye 4.7% muna Chikunguru zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura, zvichiteerana, nepo huwandu hwezvibvumirano zvemari yekutengesa zvakanyoreswa kukura kwe21.1%.
Kubata zviitiko kwakaramba kuri padanho rakaenzana mumisika inokosha senge USA, UK neChina, nepo India neAustralia vakaona kuvandudzwa kwechiitiko chekuita. Zvichakadaro, Germany, Spain uye iyo Netharenzi yakasangana nekuderera kwechiitiko chezviitiko muna Chikunguru zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura.